विप्लव नेकपाद्वारा सोलुखुम्बुमा चौकी आक्रमण प्रयास, चौकी रित्तै भेटेपछी फर्किए !
विप्लव नेकपाद्वारा सोलुखुम्बुमा चौकी आक्रमण, प्रहरी र सेना परिचालन !
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘जनयुद्ध’ शैलीमा प्रहरी चौकी आक्रमण गरेको छ। नेकपाका कार्यकर्ताले आइतबार मध्यराति सोलुखुम्बुको प्रहरी चौकी कब्जाका लागि आक्रमण गरेका हुन्। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका ३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा गर्न गएका विप्लव कार्यकर्ता चौकी रित्तै भेटेपछि फर्किएका थिए।
मध्यराति २५–३० जनाको समूह चौकी पुगेको थियो। तर प्रहरीले पूर्वसूचना अनुसार हतियार सहित सुरक्षित स्थानमा गएकाले कब्जाको रणनीति असफल भएको हो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी शालिकराम शर्मासहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार प्रदेशबाट हेलिकोप्टरमा सेना र प्रहरीको टोली समेत घटनास्थलमा पुगेको छ।
सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राना मगरले भने घटना सामान्य भएको दाबी गरे। उनले केही नभएको र सेना तथा प्रहरीको टोली पनि नआएको बताए। उनले विप्लव समूहका गतिविधि भने बढेको बताए।
जिप्रका सोलुले भने आक्रमणको प्रयास भएकाले थप मद्दत्त लिएर डीएसपी शर्माको टोली घटनास्थल पुगेको जनाएको छ।
प्रहरी चौकीमा रहेका ७ जना सुरक्षाकर्मी हतियारसहित सुरक्षित स्थानमा गएर लुकेका थिए। प्रहरीका अनुसार महाकुलुङ क्षेत्रमा विद्युत र दुरसञ्चार अवरुद्ध भएको मौका छोपेर साे आक्रमणको प्रयास भएको हो। घटनास्थल सल्लेरीदेखि करिब ७५ किलोमिटर टाढा छ।
स्रोत: नेपाल खबर डट कम